१० मध्य ५ भाई एमालेमै बाँकि समाजवादीमा फर्किए ? (नामावली) - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
१० मध्य ५ भाई एमालेमै बाँकि समाजवादीमा फर्किए ? (नामावली)
नेतृत्व चयनका लागि दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा एमालेको असन्तुष्ट समूहदस सहमतिका पक्षधर १० नेता) भित्रे मतभेद देखिएको छ।
दसबुँदे सहमतिलाई मुद्दा बनाएर संस्थापन पक्षसँग संघर्षसहितको सहकार्य गर्ने वा महाधिवेशनसम्म दसजुदेको मुद्दा सुषुप्त राख्ने भन्ने विषयमा असन्तुष्ट समूहमा मतभेद देखिएको हो ।
दसबुदे सहमतिका पक्षधर १० नेता विभाजित देखिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरूमाथि दबाब मनाउन थालेका छन्। उपाध्यक्ष भीम रावत र उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पूर्वसहमतिअनुसार दसबुको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन खोजेका छन् तर उनीहरूको कार्यशैली संस्थापन पक्षसँगको सम्बन्ध झनै जटिल हुने र त्यसले महाधिवेशनमा अप्ठ्यारो पार्न सक्ने भन्दै अन्य आठ नेताले मौनता साँचेका छन् ।
हामी यति कमजोर हुने थिएनौ, उहाँहरूको अपरिपक्त कार्यशैलीके कारण यस्तो भएको हो, दसबुँदे सहमति पक्षधर एक नेताले भने, उहाँहरूले गर्दा हामी पनि कमजोर भयौँ।
उहाँहरू जति बोल्नुहुन्न जातिकोछशतल भुसालले भने आफैँले गरेको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडानबाट पछाडि हटे पनि अरू नेताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छैनन्।
बिहीबारको स्थायी कमिटी र शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि असन्तुष्ट समूहका नेताहरूबीच दसर्बुदलाई लिएर एकरूपता छैन भन्ने देखिएको थियो ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा रावलले दसदे सहमति कार्यान्वयनको मुद्दा उठाउँदा यसका पक्षधर अन्य नेताल साथ दिएनन् । बरु दाबुकै पक्ष अष्ट राजबाली र अमृत बोहोरालगायत नेताले क्षेप गरेर ओलील नाव शान्त पारेका थिए ।
कार्यान्वयनमा आलटाल भएको भन्दै कात्तिक ५ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा रावलले दसर्बुदे सहमति कार्यान्वयन कार्यदलको संयोजकबाट राजीनामा दिएका थिए ।
सोही बैठकमा रावत र भुसालको प्रस्तुतिलाई लिएर अरू नेताले भने असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
स्थायी कमिटी बैठकमा रावल भुसाल कमरेडले भन्दा युवराज कमरेडले धेरै व्यवस्थित र कडा रूपमा कुरा राख्नुभएको थियो, दसबुँदे सहमतिमार्फत एमालेमा रहेका ती नेताले भने,
“उहाँले बैठकका कुरा बाहिर नलगाँ पनि भन्नुभएको थियो तर साधीहरूले आफ्ना कुरा बाहिर ल्याउन हतार गरे ।
मिडियामा बोलेर मात्रै नेता भइन्छ भन्ने सोच उहाँहरूले त्याग्नुपन्यो बैठकमा रावल र भुसालले दसबुदे सहमति कार्यान्वयमा ओली इमान्दार नभएको भनेर आलोचना गरेका थिए ।
प्रभु साहनिकट दुई नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेकोमा पनि रावलको आपत्ति थियो । यसमा पनि अन्य नेताले उनलाई साथ दिएनन् । शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कुन्दन कुशवाह र मोहम्मद समीरले शपथ लिएका थिए ।
घनश्याम भुसाल र भीम रावललाई साह्रै पीडा लाग्ने रे हामीलाई पीडा नहुने भन्ने हुन्छ मैले दसर्बुद पनि भनिराखेको छैन । एमाले र माओवादीबाट आउनुभएका सबै साथीलाई समेट्नुपर्छ, तब पार्टी बन्छ एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले कान्तिपुरसँग भनिन्,
त्यसकारण अनि फराकिलो मन केपी कमरेडले पनि बनाउनुपर्छ ।
हाम्रा साथीहरूले पनि मन साँघुरो बनाउन हुन सक्रियतापूर्वक आ-आफ्नो क्षेत्रमा लागेर पार्टी बनाउनुपर्छ । उपमहासचिव घनश्याम भुसालले १० बुँदे कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा एक ठाउँमा भएको बताए ।
उनले पार्टीमा प्रणाली लागू गर्ने विषयमा मतभेद हुन नसक्ने जनाए । १० बुँदे समझदारी उधिन भएकोमा खुसी हुने डरलाग्दो प्रवृत्ति छ उनले भने, यसरी डरलाग्दो संस्कृतिले प्रश्रय पाएको छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भुसाल कोरोना संक्रमण भएका कारण सहभागी लिएनन्।
स्थापी कमिटी बैठकमा भने उनले दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन र दसौं महाधिवेशनमा राजनीतिक वैचारिक मुद्दामा बहसको माग गर्दै अध्यक्ष ओलीलाई पत्र लेखेका थिए ।
तर, उनको पत्रलाई ओलीले बैठकमा छलफलको विषय बनाएनन् । दसबुदे सहमतिका पक्षधर अन्य नेताले भुसालले पत्र लेखेकोमा पनि चित्त बुझाएका छैनन् ।
पार्टीका मुद्दा असहमति कमिटीमा होइन, सार्वजनिक फोरममा उठाएको भन्दै अध्यक्ष ओली राजन र भुसालप्रति असन्तुष्ट छन् । उनले मुद्दा पार्टी कमिटीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
रावल र भुसालले आफूनिकट नेताहरूलाई एकीकृत समाजवादीमा जानबाट रोक्न नसकेकोमा पनि अरु नेता असन्तुष्ट छन् । भीम कमरेडले सुदूपश्चिममा जोगाउन सक्नु भएन, उहाँको अन्यत्र कुनै सम्पर्क छैन, नीले पनि धेरैलाई जोगाउन सक्नुभएन, दसबुँदे पक्षधर अर्का नेताले भने, लड्नका लागि जग बलियो बनाउनुपर्छ ।
अहिले अधिवेशन महाधिवेशन हुँदै छन्, उहाँहरूको त्यता ध्यान गएको छैन।”पार्टी विभाजनमा माधवकुमार नेपाललाई साथ नदिएका रावल शाक्य, शवाली भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य,योगेश भट्टराई रघुजी पन्त अमृत बोहरा दसबुदे सहमतिमार्फत एमालेमै रहने निर्णय गरेका थिए ।
अन्यत्र कार्यान्वय भए पनि सुदूरपश्चिममा सहमति कार्यान्वयन नभएको रावलको भनाइ छ । सहमति कार्यान्वयन हुँदा रावल प्रदेश इन्चार्ज हुन्थे तर अध्यक्ष ओलीले लेखराज भट्टलाई नै कायम राखेका छन्।